भूकम्पले देशलाई थिलथिलो पारेको अवस्थामा भारतले अमानवीय रूपमा अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । तत्कालीन सरकारले सो विषयमा सहजीकरण गर्न सकेन र जनताले ठूलो सास्ती बेहोर्नु पर्‍यो । जनताले सरकार भएको अनुभव गर्न प...
विगत ६ महिना देखी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त वलात्कार पछिकाे हत्याकाण्डकाे कारण गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन आलोचनाको केन्द्रमा छ । उनिहरुले आफु मातहतको सम्पुर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गरेर पनि सत्...
निर्मला बलात्कार हत्याका विषयमा बम दिदीबहिनीको ‘बयान’
म महेन्द्रनगर भीमदत्त न.पा. वडा नम्बर १८ निवासी १४ वर्षीया रोशनी बम हुँ । स्कूलमा कक्षा ९ मा मसँगै अध्यनरत मेरी साथी निर्मला पन्तको हत्या भएकोछ । उनको शब २०७५ साल साउन ११ गते भेटिनु भन्दा अघिल्लो दिन ...
साइकलयात्राबाट पर्यटकीय क्षेत्र चिनाउने सानो प्रयास
मानिसहरुका आआफ्नै सौख हुन्छन् । हरेक व्यक्तिका सौखहरु राष्ट्रको निम्ती उल्लेखनिय योगदान दिन असमर्थ हुन्छन् । तर केही सौखहरु व्यक्तिगत जस्ता लागे पनि मुलुक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छन् भन्ने ल...
आजभोली कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना आयोग मार्फत सिंगो कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि गुरु योजना निर्माण गर्न वहस संचालन गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । गुरु योजना विना दीर...
बाजुरामा जीप भाडाका बारेमा लेख्दा जीप चढ्न नपाइने,जैतुन खेतीको जालझेल र खाद्य संस्थानद्वारा वितरण गरिने चामलको अनियमितताका बारेमा लेख्दा दरिद्र मानसिकताको उपाधि पाइयो । छाउपडीका प्रथाका बारेमा लेख्दा ...
प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले कुटे ! " त्यस्तै कुटाइ खाएका पिडित सचिव विद्यानाथ झा अस्पताल भर्ना भएका छन् । सचिव झा पिटाइको कारण शारीरिक समस्या भएर साेही...
आदिम साम्वयादी युगको पतन र सामान्तवादी युगको उदय भए पश्चात विश्वको इतिहासको धेरै जसो कालखण्ड राजतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा आधारित भयो । अर्थात राजा (सबै क्षेत्रमा पहूँच भएका उच्च खानदानिया) ले वंशिया...
[caption id="" align="alignright" width="90"] अर्जुन थापा[/caption] मेरी छोरीले घरको झ्यालबाट बाटोमा त्यो केटालाई हेरेकै भरमा मनको ढोका उघारिसकिछ । हुन त घरअगाडि बाटो भएर जाँदा नदेखेको त मैले पनि कहा...
एकादेशमा अचम्मै राम्री एउटी यूवती थिईन। गाउँ शहरमा उनको रुप र जीउडालको राम्रै प्रशंसा हुन्थ्यो। जवानहरु उनलाई पाउन भुतुक्कै हुन्थ्ये। तर यूवती भने तिनीहरुलाई मान्छे नैं गन्दैनथिन। उनलाई आफ्नो रुप र जी...
आचार्य चाणक्यका अनुसार"जब सम्म सुयोग्य युवाहरूले राजनीतिमा सक्रियता देखाउदैनन् तब सम्म अयोग्यहरूले शासन गर्छन् ।" वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा उक्त उक्ति समय सान्दर्भिक ठहरिदै गइरहेको देखिन्छ भन्दा अनुपय...
भीमदत्त नगरपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटनलाई मध्यनजर गरी रौटेलादेखि ब्रह्मदेबसम्म जैविक धार्मिक पर्यटन मार्ग निर्माण गरिएको हो । यो मार्गमा आइतबार जैविक धार्मिक पर्यटन मार्ग म्याराथन मार्च हुँद...
कञ्चनपुर । गत साउन ११ गते बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै कञ्चनपुर सहित देशभर आन्दोलन जारी छ। निर्मला हत्या प्रकरणमा सप्रमाण नष्ट गरेर ...
कैलाली । नेपाल–भारत आवागमनमा सहजता मात्र नभई सुदुरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्ने गरिएको महाकाली नदीको चार लेनको पक्की पुल निर्माणको गति द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । पूर्वमा कर्णाली नदिदेखि पश्चिम महा...
सबैका जीवनमा आ आफ्ना कथा,बेथा र वेदना हुन्छन् । पीडा र वेदना नभएका मानिस सायदै भेटिएलान । हरेक मानिसका स्वभाव अनुसार पिडाहरु कसैले व्यक्त गर्छन त कसैले मनमनै राख्ने गर्छन् । भगवान गौतम बुद्धले भनेका छ...
ठुलो एकादशीको शुभ साइत, कथा र महत्व
ठुलो एकादशी, देवोत्थान एकादशी र तुलसीबिबाहको हिन्दु धर्ममा विशेष महत्व छ । हिन्दु धर्मको मान्यता अनुसार सृष्टिकाे पालनहार श्रीहरि विष्णु चार महिना सुतेर जागेको दिन एकादशी मानिदै आएको छ । अाजकाे दिनमा...
सल्यान । लोप हुने अवस्थामा पुगेको सोरठी नाच संरक्षणमा सल्यानमा पहल थालिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले मौलिक कला संस्कृती संरक्षणमा चासो देखाएपछि सोरठी नाचको कला भएकाहरु व्युँझने कोसिस गरेका छन् । युवा प...
वास्तवमा शिक्षा के हो ? कस्तो शिक्षा गुणस्तरिय शिक्षा हो । प्राचिन समयमा रुखको फेद र ऋषिको कुटीमा बसेर लिइने गुरुकुल प्रणालीको शिक्षा देखी वर्तमान युगमा घरको कोठा भित्र बसेर कम्प्युटरबाट लिइने शिक्षा ...
दिदीसँग केही दिनको बसाइले नै जीवन बदलियो भन्ने सोच पलायो । तर, सबै सपना बालुवामा मिसिन पुगे । दिदीको धन्दा रहेछ अर्कै । सुकिला–मुकिला भएर हिँड्ने गरे पनि धन्दा भने फरक किसिमको । दिनभर रत्नपार्क कि त ठ...